"ရွာတိုင်းအတွက်ကဗျာလက်ဆောင်": 4.6. The Counting Method (part 2) ( ၄.၆ ရေတွက်နည်း - အပိုင်း ၂)
4.6. The Counting Method (part 2) ( ၄.၆ ရေတွက်နည်း - အပိုင်း ၂)
To develop breathing meditation by way of this counting method, the meditator should sit; with legs folded crosswise, body erect and eyes close.
ဤရေတွက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ဝင်လေထွက်လေကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများရန်အတွက် ယောဂီသည် တပ္ပလင်ခွေ၊ ကိုယ်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်ထား၊ မျက်လုံးကိုမှိတ်၍ ထိုင်သင့်လေသည်။
Then, he is ready to start counting the breaths with mindfulness. The important thing is that the mind should not follow the passage of in-breath and out-breath just asagate keeper who just watches the people at the gate. Likewise, mind should focus on nose-tip or upper lip where breaths touch and aware on in-breath and out-breath by way of counting.
ထို့နောက်တွင်ကား သူသည် သတိဖြင့် ဝင်လေထွက်လေ ရေတွက်မှုကို စတင်ရန် အသင့်ဖြစ်လေပြီ။ အရေးကြီးသည်မှာ စိတ်သည် ဂိတ်၌ ခရီးသည်တို့ကို စောင့်ကြည့်သူ ဂိတ်စောင့်ကဲ့သို့ပင် ဝင်လေနှင့်ထွက်လေ ရွေ့လျားဖြတ်သန်းမှုနောက်သို့ လိုက်ပါစီးမျောမသွားသင့်ခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့အတူ စိတ်သည် ဝင်လေထွက်လေတွေ့ထိရာ နှာခေါင်းဖျား (သို့မဟုတ်) အပေါ်နှုတ်ခမ်း၌ အာရုံစိုက်သင့်ပြီး ရေတွက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ဝင်လေ နှင့် ထွက်လေကို သိမှတ်နေသင့်လေသည်။
Indeed, there are three notable things of mindfulness of breathing meditation; nose-tip or upper lip (nimitta), in-breath (assāsa) and out-breath (passāsa). These three things are not the object ofasingle consciousness. But forameditator who does not know these three things, the development of mindfulness of breathing meditation is not attained. Therefore,ameditator has to be just asaman who cutsatimber too. Whenaman cuts the timber placed on the ground with saw, his mindfulness is set up by the saw’s teeth where they touch the timber whenever the saw’s teeth approach and recede. Likewise,ameditator should know the three things; nose-tip or upper lip (nimitta), in-breaths and out-breaths whenever they touch, and count them by way of counting.
စင်စစ်တွင် နှာခေါင်းဖျား (သို့မဟုတ်) အပေါ်နှုတ်ခမ်း (နိမိတ္တ)၊ ဝင်လေ (အဿာသ) နှင့် ထွက်လေ (ပဿာသ) ဟူ၍ ဝင်လေထွက်လေသတိကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပြုဖွယ်ရာ သုံးခုရှိပေသည်။ ဤသုံးခုသည် တစ်ခုတည်းသောစိတ်၏ အာရုံတရားတို့ မဟုတ်ကြပါလေ။ သို့ရာတွင် ဤသုံးခုကို မသိသော ယောဂီအား ဝင်လေထွက်လေသတိဘာဝနာ မဖြစ်ထွန်းပါပေ။ ထို့ကြောင့် ယောဂီသည် သစ်ရွေသမားကဲ့သို့ ဖြစ်သင့်လေသည်။ သစ်ရွေသမားသည် မြေကြီးပေါ်ချထားသောသစ်ကို လွှဖြင့် ဖြတ်သောအခါ လွှသွားကို တွန်းတိုင်းဆွဲတိုင်း သစ်တုံးပေါ် လွှသွားထိရာအရပ်ရှိ လွှသွားအပေါ်၌ သူ၏စိတ်ကို ထားလေသည်။ ထိုနည်းအတူ ယောဂီသည်လည်း ဝင်လေထွက်လေ တိုးထိတိုင်း နှာခေါင်းဖျား (သို့မဟုတ်) အပေါ်နှုတ်ခမ်း (နိမိတ္တ)၊ ဝင်လေ နှင့် ထွက်လေ ဟူသော အရာသုံးမျိုးကို သိမှတ်သင့်ပြီး ၎င်းတို့ကို ရေတွက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ရေတွက်အပ်လေသည်။
He should bear in mind that mindfulness of breathing must be counted only at the moment of breath touching on the touching point of nose-tip or upper-lip. He must not count breath before or after touching on the touching point of nose-tip or upper-lip.
ယောဂီသည် လေတိုးထိရာ နှာခေါင်းဖျား (သို့မဟုတ်) အပေါ်နှုတ်ခမ်း၌ ဝင်လေထွက်လေတိုးထိခိုက်တွင်သာ ဝင်လေထွက်လေသတိကို ရေတွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားအပ်လေသည်။ ဝင်လေထွက်လေကို လေတိုးထိရာ နှာခေါင်းဖျား (သို့မဟုတ်) အပေါ်နှုတ်ခမ်း၌ ဝင်လေထွက်လေ မတိုးထိခင် (သို့မဟုတ်) တိုးထိပြီးမှ လုံးဝမရေတွက်ရပါလေ။
During each vāra, the meditator must try to develop the three parts of concentration; right effort, right mindfulness and right concentration. That means when taking breathing meditation by way of counting method, during each vāra after out-breath, the in-breath must be breathed, and after breathing in, the out-breath must be breathed with right effort. If the right effort does not support to breathe, even though there is automatic breathing, the right effort is broken. If the counting is missing, the right mindfulness is broken. If mind is going round without focus on breaths, the right concentration is broken. During one session of meditation, meditator should try to get the complete vāra as much as he can; twenty vāra, thirty vāra or more than that.
ယောဂီသည် ဝါရတစ်ခုစီအတွင်း သမ္မာဝါယာမ၊ သမ္မာသတိ နှင့် သမ္မာသမာဓိ ဟုဆိုအပ်သော သမာဓိမဂ္ဂင်သုံးပါးကို တိုးပွားစေရန် ကြိုးစားရပေမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရေတွက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ဝင်လေထွက်လေကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်နေစဉ် ဝါရတစ်ခုစီအတွင်း ထွက်လေပြီးနောက် ဝင်လေကို (သမ္မာဝါယာမဖြင့်) ရှူသွင်းရမည်၊ ဝင်လေပြီးနောက် ထွက်လေကို သမ္မာဝါယာမဖြင့် ရှူထုတ်ရမည်။ အကယ်၍ လေရှူရန် သမ္မာဝါယာမ မပံ့ပိုးလျှင် အလိုအလျောက် ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေစေကာမူ သမ္မာဝါယာမမဂ္ဂင် ကျိုးပျက်လေသည်။ အကယ်၍ ရေတွက်မှု မေ့လျော့မှားယွင်းလျှင် သမ္မာသတိမဂ္ဂင် ကျိုးပျက်လေသည်။ အကယ်၍ စိတ်သည် ဝင်လေထွက်လေအပေါ် အာရုံမစိုက်ဘဲ ဟိုဟိုဒီဒီ ပျံ့လွင့်ပြေးသွားလျှင် သမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင် ကျိုးပျက်လေသည်။ ယောဂီသည် တရားအားထုတ်ချိန်တစ်ခုအတွင်း ဝါရနှစ်ဆယ်၊ ဝါရသုံးဆယ် (သို့မဟုတ်) ထို့ထက်များများ အတတ်နိုင်ဆုံး လုံးဝပြည့်စုံသောဝါရများကို ရရှိရန် ကြိုးစားအားထုတ်သင့်လေသည်။
According to Ven. Meayzin Tawra Saradaw, by way of counting as said above, when the mindfulness breaths are completely counted from one to eight, it should be recorded as one time (eka- vāra) by foldingafinger. In this way, the first ten times (dasa vāra) of counting should be recorded on ten fingers. Then, the group of the first ten times of counting should be mentally placed at the right wrist. Another group should be placed at right elbow, the third the right shoulder, the fourth the right ear, the fifth the right upper corner of head, the sixth the left upper corner of head, the seventh the left ear, the eighth the left shoulder, the nine the left elbow and the tenth group should be placed at the left wrist. Then, the meditator completes hundred times (sata vāra) of counting breath.
မြေဇင်းတောရဆရာတော်၏ အဆိုအရ အထက်တွင်ပြဆိုခဲ့ပြီးသော ရေတွက်နည်းဖြင့် ဝင်လေထွက်လေသတိကို တစ်မှရှစ်အထိ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေတွက်ပြီးသောအခါ လက်ချောင်းကလေးတစ်ချောင်းကို ချိုး၍ တစ်ကြိမ် ဟု မှတ်သားထားသင့်ပေသည်။ ဤသို့လျှင် လက်ဦးရေတွက်မှုဆယ်ကြိမ် (ဒသဝါရ) ကို လက်ချောင်း ဆယ်ချောင်းတွင် မှတ်သားအပ်လေသည်။ ထို့နောက် လက်ဦးရေတွက်မှုဆယ်ကြိမ်တစ်စုကို ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်တွင် စိတ်ဖြင့် (မှတ်သား) ထားအပ်လေသည်။ နောက်ထပ် (ရေတွက်မှု ဆယ်ကြိမ်) တစ်စုကို ညာဘက်တံတောင်ဆစ်၊ သုံးခုမြောက်အစုကို ညာဘက်ပုခုံး၊ လေးခုမြောက်အစုကို ညာဘက်နားရွက်၊ ငါးခုမြောက်အစုကို ညာဘက်ချိုစောင်း၊ ခြောက်ခုမြောက်အစုကို ဘယ်ဘက်ချိုစောင်း၊ ခုနစ်ခုမြောက်အစုကို ဘယ်ဘက်နားရွက်၊ ရှစ်ခုမြောက်အစုကို ဘယ်ဘက်ပုခုံး၊ ကိုးခုမြောက်အစုကို ဘယ်ဘက်တံတောင်ဆစ် နှင့် ဆယ်ခုမြောက်အစုကို ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဝတ်တွင် (စိတ်ဖြင့် မှတ်သား) ထားရှိအပ်လေသည်။ ဤတွင် ယောဂီသည် ဝင်လေထွက်လေရေတွက်မှု အကြိမ်တစ်ရာ (သတဝါရ) ကို ပြည့်စုံစေလေသည်။
Placing the Vāras mentally
Sometimes, the mind runs into other objects during counting. In that situation, the meditator should reset the recent counting process, but no need to delete the former records of counting in the recent session. For example, after the meditator have already completed five times (Pañca vāra) and four folded fingers, then if the mind does not focus on breath or something is wrong in progress, he must reset for the record of five times and five folded fingers.
တခါတရံ စိတ်သည် (ဝင်လေထွက်လေ) ရေတွက်နေစဉ်အတွင်း အခြားအာရုံများသို့ ပြေးသွားတတ်လေသည်။ ထိုအခါ ယောဂီသည် လက်ရှိရေတွက်နေဆဲအစဉ်ကို ပြန်လည်ရေတွက်သင့်ပေသည်။ သို့သော် လက်ရှိတရားအားထုတ်ချိန်အတွင်း ရေတွက်ထားပြီးသား ကနဦးမှတ်သားမှုများကိုမူ ပယ်ဖျက်ပစ်ရန် မလိုအပ်ပေ။ ဥပမာ - ယောဂီသည် ငါးဝါရ နှင့် လက်ချောင်းလေးချောင်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရထားပြီးနောက် စိတ်သည် ဝင်လေထွက်လေအပေါ် အာရုံမစိုက်တော့ပါလျှင် (သို့မဟုတ်) အားထုတ်မှုအတွင်း အမှားအယွင်း တစုံတရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါလျှင် သူသည် ငါးဝါရနှင့် လက်ချောင်းငါးချောင်းအတွက် မှတ်သားမှုကို ပြန်လည်စတင်ရမည် ဖြစ်လေသည်။
Dr. Visarada (Rammavati)
 Pṭsm. I 171: Evamevaṃ bhikkhu nāsikagge vā mukhanimitte vā satiṃ upaṭṭhapetvā nisinno hoti; PṭsmA 471: In Paṭisambhidāmagga, it is said “nimittaṃ assāsapassāsā, anārammaṇamekacittassa, ajānato tayo dhamme, bhāvanā nupalabbhati” (Pṭsm. I 170) . For about that, the commentary of Paṭisambhidhāmagga defines the word ‘nimitta’ as ‘nimittanti assāsapassāsānaṃ phusanaṭṭhānaṃ. Assāsapassāsā hi dīghanāsikassa nāsāpuṭaṃ ghaṭṭentā pavattanti, rassanāsikassa uttaroṭṭhaṃ; nimitta means the touching point of in-breath and out-breath. For one who breathes long they touch at the nose-tip, and for one who breathes short they touch at the upper lip.’
 Vism. I 273: ‘‘Kathaṃ ime tayo dhammā ekacittassa ārammaṇā na honti, na cime tayo dhammā aviditā honti, na ca cittaṃ vikkhepaṃ gacchati, padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhi gacchati? Seyyathāpi rukkho same bhūmibhāge nikkhitto, tamenaṃ puriso kakacena chindeyya. Rukkhe phuṭṭhakakacadantānaṃ vasena purisassa sati upaṭṭhitā hoti, na āgate vā gate vā kakacadante manasi karoti, na āgatā vā gatā vā kakacadantā aviditā honti, padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhigacchati.”
‘‘Yathā rukkho same bhūmibhāge nikkhitto, evaṃ upanibandhanānimittaṃ. Yathā kakacadantā, evaṃ assāsapassāsā. Yathā rukkhe phuṭṭhakakacadantānaṃ vasena purisassa sati upaṭṭhitā hoti, na āgate vā gate vā kakacadante manasi karoti, na āgatā vā gatā vā kakacadantā aviditā honti, padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhigacchati, evameva bhikkhu nāsikagge vā mukhanimitte vā satiṃ upaṭṭhapetvā nisinno hoti, na āgate vā gate vā assāsapassāse manasi karoti, na ca āgatā vā gatā vā assāsapassāsā aviditā honti, padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhigacchati.”
 Ven. Kelāsa, The Practice of Tranquillity and Insight Meditation by Kannī Method, 21.
 Kanni Saradaw, Yogipāragu, 17.
 Ven. Kelāsa, The Practice of Tranquillity and Insight Meditation by Kannī Method, 20.
Posted by အရှင်ဝိသာရဒ(ရမ္မာဝတီ) at 8:32 AM
Labels: အာနာပါနကျင့်စဉ် (Eng-မြန်မာ)
အရှင်ဝိသာရဒ (ရမ္မာဝတီ )
ရွာတိုင်းအတွက် ကဗျာလက်ဆောင် ဘလော့မှ ကြိုဆိုပါ၏
အပြင်မှာ ဆုံဖူးသူ ဘလော့မိတ်ဆွေများ
Three Days Grace Life Starts Now (Full Album)
“ သာသနာ့ရောင်ခြည်အသင်း ”
၂၇ ကြိမ်မြောက် အလှူတော်အတွက် နှိုးဆော်ခြင်း